Chelsea oo iska diiday dalab cajiib ah oo laga soo gudbiyay N’Golo Kanté – Gool FM
(London) 11 Sebt 2020. Chelsea ayaa iska diiday dalab xiiso leh oo laga soo gudbiyay xiddigeeda khadka dhexe reer France ee N’Golo Kanté, kaasoo ay ka soo gudbisay kooxda Inter Milan.
Kooxda reer Talyaani ee Inter Milan ayaa u soo bandhigtay dhigeeda Chelsea heshiis ay isku dhaafsanayaan xiddigaha Christian Eriksen iyo N’Golo Kanté.
Sida laga soo xigtay warbixin lagu daabacay wargeyska “Daily Mail” maamulka kooxda reer England ee Chelsea ayaa diiday dalabka Inter Milan, maadaama aysan waligood xiisa ka muujinin adeega xiddigaha Christian Eriksen iyo Marcelo Brozović.
Wargeyska ayaa wuxuu hadalkiisa intaas ku sii daray in Christian Eriksen uu ku fashilmay inuu isku muujiyo kooxda reer Talyaani ee Inter Milan, tan iyo markii uu ugu soo biiray bishii January qiimo dhan 18 million pounds.
Yeelkeede, Inter Milan ayaa ka fiirsaneysa inay iska iibiso Christian Eriksen inkastoo uu sheegay isbuucaan inuu ku faraxsan yahay Talyaaniga.
Labadan kooxood ayaa xilli ciyaareedka cusub ku soo galaya horyaalada ay ka ciyaaraan ee Premier League iyo Serie A iyaga oo leh hammi weyn oo ah in ay ka dhabeeyaan riyada taageerayaashooda, ha noqoto ku guuleysiga tartamada gudaha ama Champions League oo ay kaga qayb geli doonaan.